Iran: Tantara Lava Sady Maharary Momba Ireo Bilaogera Nogadraina · Global Voices teny Malagasy
Iran: Tantara Lava Sady Maharary Momba Ireo Bilaogera Nogadraina
Voadika ny 10 Marsa 2018 3:05 GMT
Voaheloka higadra roa taona sy tapany an-tranomaizina ilay Iraniana bilaogera sady mpanao gazety, Omid Reza Mirsyafi, tamin'ity herinandro ity. Voampanga ho nanivaiva mpitondra fivavahana sy nanao fampielezan-kevitra manohitra ny Repoblika Islamika izy. Nandritra ny 5 taona lasa, bilaogera maromaro any Iran no niatrika ny fonja sy ny fanenjehana noho ny bilaogin'izy ireo. Nogadraina nandritra ny andro vitsivitsy ny sasany raha nomelohina hatramin'ny taona maro kosa ny hafa.
Simon Columbus, mpikaroka manadihady ny tranga momba ireo bilaogera nogadraina manerantany (lahatsoratra mbola ho avy) manombatombana, tamin'ny alàlan'ny mailaka ho ahy, fa eo amin'ny 20 ny isan'ny bilaogera Iraniana nosamborina noho ny hetsika fibilaoginy fotsiny. Bilaogera Iraniana 30 kosa no nigadra noho ny hetsika ara-politika, izay mety tsy mifandray mivantana amin'ny bilaogin'izy ireo.
Fisamborana manokana sy faobe
Sina Motalebi no bilaogera Iraniana voalohany nogadraina. Tamin'ny volana aprily 2003, nosamborin'ny sampam-pitsikilovana avy ao amin'ny fampiharana ny lalàna izy noho ny asa sorany tao amin'ny bilaoginy sy any an-kafa ary ny antsafa tamin'ny media vahiny. Nigadra 23 andro tamin'ny efitra manokana tao amin'ny fonja miafina iray izy talohan'ny namotsorana azy. Tamin'ny volana Desambra 2003, nandao an'i Iran ho an'i Holandy i Sina, izay nitadiavany fialokalofana.
Teo anelanelan'ny volana Aogositra sy novambra 2004, nanagadra bilaogera sy mpanao gazety antserasera 20 mahery ny mpiasan'ny fitsarana miasa amin'ny anaran'ny lehiben'ny mpampanoa lalàna, Saeed Mortazavi. Taorian'ny famotsorana azy ireo, nijoro vavolombelona teo anoloan'ny komitin'ny fiadidiana ny sasany tamin'ireo gadra, nanasongadina ny fampijaliana nandritra ny fitazonana azy ireo. Niseho teo anoloan'ny komity i Hanif Mazroi, Massoud Ghoreishi, Fereshteh Ghazi, Arash Naderpour sy Mahbobeh Abasgholizadeh tamin'ny 25 Desambra 2004. Tamin'ny 1 janoary 2005, nilaza ny tantaran'izy ireo momba ny fampijaliana ihany koa i Omid Memarian sy Ruzbeh Mir Ebrahimi.
Mikasika ireo mpanao famotorana azy tany am-ponja, nilaza i Memarian fa “olona nanana ny endrik'olombelona fotsiny izy ireo” [Fa]. Nampiany hoe: “Rehefa nivoaka ny fonja aho, dia niteny tamin'ny tenako hoe: ‘Adinoy ireo olona ireo ary aza avela handratra ny fanantenako’, saingy mbola mitoetra ao an-tsaiko foana ny zavatra niainako. Mbola tadidiko foana ny bitsibitsiky ny mpiambina sy ny fanalahidy mamoha ny varavaran'ny efitro tany am-ponja. “
“Ho an'ny alika izany rehetra izany!”
Reza Valizadeh, mpanao gazety sady bilaogera, no nitarika ny fitorian'ny biraon'ny filoham-pirenena Iraniana ary nogadraina tamin'ny volana Novambra 2007. Maro ny bilaogy sy vohikala Iraniana nilaza fa ny antony lehibe nisamborana azy dia noho izy namoaka fa nividy alika efatra avy any Alemaina tamin'ny vidiny teo amin'ny 150.000 dolara isaky ny alika ny mpiasan'ny fiarovana an'i Ahmadinejad. Noafahana izy taorian'ny herinandro maromaro nitazonana azy.
Tsy mila fanevatevana, azafady
Nosamborina voalohany tamin'ny Novambra 2004 i Mojtaba Saminejad. Navotsotra izy tamin'ny 27 Janoary 2005 rehefa nandoa onitra, saingy nosamborina indray tamin'ny 12 Febroary 2005 satria natao avo roa heny ny onitra ary tsy nahavita nandoa izany izy.
Araka ny voalazan'ireo mpanohana an'i Saminejad, ny antony nisamborana azy dia izy nibilaogy momba ny fisamborana ireo bilaogera telo hafa. Araka ireo fiampangana ofisialy, voarohirohy ho nanevateva ny lehiben'ny fanjakan'i Iran (Mpitarika Faratampony), “manohintohina ny fiarovam-pirenena”, ary “nanevateva ny mpaminany” i Saminejad. Hita fa meloka izy ary voaheloka higadra roa taona sy folo volana.
Ny 28 Jona 2005, hita fa tsy “meloka” tamin'ny fiampangàna “fanevatevana mpaminany” (sazy fanamelohana ho faty) i Saminejad. Navotsotra izy volana vitsivitsy lasa izay, saingy mbola eo ambany teritery.
Notanana nihoatra ny iray volana
40 andro mahery izay, nisy tatitra nivoaka fa nosamborina tany Tehran i Hossein Derakhshan (fantatra amin'ny hoe Hoder), bilaogera Iraniana malaza. Tsy mazava ny anton'ny fisamborana azy, saingy milaza ny sasany fa ny diany roa (nalaza be tamin'ny fampahalalam-baovao) tany Israely no tena antony.
Nilaza i Z8tun, bilaogera fa Iraniana hafa no tratra nitsidika an'i Israely, saingy navotsotra afaka ora vitsy taorian'ny fanadihadiana. Mihevitra ny sasany fa nosamborina noho izy nanevateva ireo mpitondra fivavahana sasany ao amin'ny firenena i Derakhshan izay lasa mpanohana ny governemantan'ny filoha Ahmadinejad tato anatin'ny taona vitsivitsy. Nilaza tamin'ny fampahalalam-baovao Tandrefana mihitsy izy tenany, na dia teo aza ny fijoroana vavolombelona maro momba ireo bilaogera nogadraina, fa tsy misy olona migadra noho ny votoatim-bilaoginy any Iran. Misy ny pejy Facebook Avotsory Hoder manentana ny famotsorana azy.
Vakio ny “Bilaogera Iraniana Miresaka Ny Zavatra Niainan'izy ireo Tany Am-ponja“.
Sary avy amin'i Mojtaba Saminejad tao amin'ny Wikimedia Commons